Amanqaku kaTara Kelly Martech Zone |
Amanqaku ngu UTara Kelly
Umsunguli we-serial, umbhali opapashiweyo kunye nomsunguli, umongameli kunye ne-CEO ye Isoftware yeSPLICE, UTara unomdla kwitekhnoloji enokubutshintsha ubomi bube ngcono. Usoloko ehambisa le nkolelo kuphuhliso lweetekhnoloji ezonyusa ukusebenza, ezenza ukuhanjiswa kweenkonzo okungcono, kunye nokuphucula amava abathengi. Oku kukhokelele ekudalweni kweenkampani ezintathu zamava abathengi kunye nokuguqula umbono omtsha ube lilungelo lobunikazi, itekhnoloji yokuthengisa edibanisa imijelo yedatha ukwenza imiyalezo eyeyakho, ezenzekelayo.
Sukuvumela iiBhotshi zithethele iBrand yakho!
NgoLwesihlanu, ngoJuni 1, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UTara Kelly
U-Alexa, umncedisi wabucala onikwe amandla lilizwi eAmazon, unokuqhuba ngaphezulu kwe- $ 10 yezigidigidi kwingeniso kwiminyaka nje embalwa. Kwasekuqaleni kukaJanuwari, uGoogle wathi uthengise ngaphezulu kwezigidi ezi-6 zezixhobo zeKhaya kuGoogle ukusukela phakathi ku-Okthobha. Iibhothi ezincedisayo ezinje nge-Alexa kunye ne-Google kaGoogle ziba yinto ebalulekileyo kubomi beli xesha, kwaye oko kunika ithuba elimangalisayo lokuba iimveliso zinxibelelane nabathengi kwiqonga elitsha. Ukulangazelela ukwamkela elo thuba, iimveliso ziyangxama